Mụọ otu esi guzosie ike na azụmaahịa maka ụlọ ọrụ gị
Inclọ ọrụ Incorporated na-enye ọtụtụ mmemme iji wulite kredit. Anyị nwere ike ịnye gị ụzọ isi ikewazie onwe gị na azụmaahịa gị. Site na usoro pụrụ iche anyị, anyị na-ejikọ afọ 4-6 nkịtị iji guzobe azụmaahịa ma nweta otuto ruo naanị ụbọchị 7 ruo 14, na-ekepụta profaịlụ akwụmụgwọ ọhụụ dabere na nọmba ID Tax gị na ikike iji ruo eru.
Ọ bụrụ na ịchọrọ $ 20,000 ka $ 400,000 ma ọ bụ karịa na kredit, kpọọ ma ọ bụ jupụta fọm n'aka nri.
Anyị nkwa: Ọ bụrụ na ị na-eso usoro ihe omume anyị na anyị anaghị akwụ gị ụgwọ na ọ gaghị efu gị otu narị.
Kpọọ 1-888-444-4812 maka nkọwa
Na mgbakwunye, na a LLC usoro, otu nwere ike inwe otu ụlọ ọrụ na usoro nke ọ bụla nwere ike igosipụta profaịlụ kredit dị iche. Nke a nwere ike ịmụba ọnụego kredit nwere ike ịnweta site na ọnụọgụ nke otu ahọpụtara ịmepụta.
Site na mpaghara itinye ego ugbu a, anyị enweghị mmemme maka ndị nwere FICO akara na-erughị 640. Maka ndị ahụ, jụọ ajụjụ maka mmezi mmezi ụgwọ anyị.
Nwere ike ịmebe profaịlụ gị maka gị ma nye gị ngwaọrụ na akụrụngwa iji gosipụta azụmaahịa dị ngwa - ma ọ bụ mee ka anyị rụọ ọrụ niile maka gị. Anyị na-enye mmemme nke bụ 95% aka, na-ahapụ ndị ọkachamara nzere ụlọ ọrụ ka ha rụọ ọrụ ahụ. Lee Mmemme Ebe E Si Nweta Ọgbakọ niile
Nweta akwụmụgwọ ụlọ ọrụ - Ichepụta kredit azụmahịa gị nwere ike inye uru ndị a:
Usoro ịkwụ ụgwọ ka mma (Net 30 ma ọ bụ Net 60)
Kaadị azụmaahịa azụmaahịa
Legbọ alaala na-agbazite na enweghị nkwa ọ bụla ma ọ bụ nyocha akara onwe
Mmalite azụmahịa na isi obodo n’uba
Efu dị ala, nlọghachi dị elu
Ozugbo ichoputara ihe ngbanye aka n ’ulo oru enwere ike inweta:
Mkpo onwe ya
Usoro nke kredit & Usoro ugwo ka mma (Net 30 ma obu Net 60)
Obere Mmasị dị ala
Kedu mgbe ị ga-ewepụta Ebe Ego Azụmaahịa
Plain ma dị mfe, ị chọrọ rụpụta azụmaahịa azụmahịa tupu ụlọ ọrụ gị achọọ ya! O nweghi ụlọ ọrụ chọrọ ịgbazinye, ma ọ bụ tụkwasara ma ọ bụ tụkwasị ụlọ ọrụ na-enweghị ike igosipụta nkwụsi ike ego ya. Dịka onye nwe azụmaahịa ị kwesịrị ịmalite iche banyere iwulite akụkọ ihe mere eme ozugbo ị webatara. Inwere ike ime nke a site na ịnweta nọmba D&B DUNS gị. Usoro a ga - ekwe omume, na iji ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ Limited Liability Company (LLC), yana iji akara njirimara ụtụ isi gị (EIN).
Mgbe ndị ọrụ nchekwa na ndị nwe ya jiri profaịlụ nke onwe ha iji nweta kredit ma ọ bụ nweta kaadị akwụmụgwọ maka azụmaahịa ahụ, ha na-etinye ohere nke ibu ọrụ nke onwe ha, na-akụda mkpuchi mkpuchi ụlọ ọrụ site na ijikọ azụmahịa. Enwere ụzọ ihe abụọ nwere ndị ahịa azụmaahịa ekwesịghị ịgbalị iji mkpuchi nkeonwe na ọnọdụ a.
Onye ga-anye aka n’agha ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ enweghị ike ịkwụ ụgwọ ahụ
Ekele a natara maka azụmaahịa a nwere ike ibute ịnara akụ onwe onye.
Buru n'uche, a na-achịkọta ọkwa azụmaahịa azụmaahịa n'otu ụzọ ahụ dịka akara akwụmụgwọ onwe gị. Ejiri ọtụtụ ihe mepụta ha, gụnyere: kredit dịnụ, ọnụego akwụmụgwọ dịnụ ejiri, akụkọ ịkwụ ụgwọ, akụkọ mmefu ego, na ọtụtụ ngosipụta ego.
Inweta akara akwụmụgwọ maka azụmaahịa bụ usoro ewebere ka oge na-aga. Kwado azụmaahịa ahụ, ihe ndị ọzọ ka ọ ga - eme iji wulite otuto ma nweta ego na-eji enweghị nkwa onwe gị. Afọ na-enye ọtụtụ ndị azụmaahịa ohere igosipụta ntụkwasị obi ha na nkwụsi ike ego ha, mana nke a ekwesịghị igbochi azụmaahịa ndị na-eto eto ịgbalị itinye akwụkwọ maka kredit. Zọ kachasị mma maka azụmaahịa na-eto eto nwere ike igosipụta ntụkwasị obi ha bụ site na iwusi mkpesa akwụmụgwọ D&B ha.
Mepụta Ebe E Si Nweta
Companieslọ ọrụ Incorporated ewepụtala mmemme iji nye azụmahịa gị ngwa ọrụ iji nyere gị aka ikewapụ azụmahịa gị na ego gị. Naanị site na imepụta profaịlụ akwụmụgwọ ọhụrụ dabere na Nọmba Tax ID gị.
Ọ na-amalite site na anyị Mmemme Nrụpụta Ihe Ebe E Si Nweta, nke ga-eweputa profaịlụ ohuru ohuru na akara. Ebumnuche bụ iguzobe akara kredit nke 75 ma ọ bụ karịa. N'iji atụnyere akara nke 80 dị ka ịnwe akara n'aka nke 800: Nke ahụ bụ ezigbo otuto. Anyị achịkọtara ma nye ohere, sistemụ akara ngosi maka ụlọ ọrụ mkpesa izizi.
A na-ewu akara nzere site na ịnwe akara akwụmụgwọ, kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ na ntụnyere aka na-azụ ahịa na-agwa ndị isi ụlọ ọrụ azụmaahịa. Maka ọtụtụ azụmaahịa ọ na-esiri ike ịchọta onye na-agbazinye ego njikere inye ọtụtụ ụdị otuto ụlọ ọrụ na enweghị nkwa onwe onye na-enweghị akụkọ ndekọ aha azụmaahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na i nwere ntụaka aka gị, anyị ga-esoro ha rụpụta akara ahụ. Agbanyeghị ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego chọrọ mgbakwunye azụmaahịa ndị ọzọ kọọrọ ndị ụlọ ọrụ kredit ga-emeghe ahịrị kredit ma bido kọọrọ ndị isi ụlọ ọrụ. Agbanyeghị na usoro a na - ewepụtakarị oge edepụtara n'elu, oge ụfọdụ ka ọnwa anọ ma ọ bụ isii achọrọ ka ndị na - ere ahia nyochaa njikwa mara nke ọma.
Anyị na-enye nduzi banyere otu esi ahọta ụlọ ọrụ ndị ga-enye ahịa gị ezigbo ụgwọ ozugbo. Akụkụ nke usoro ihe omume ahụ na-enyere gị aka na ngwa niile na usoro ịkọwapụta yana ịhọrọ azụmaahịa ga-enye ụlọ ọrụ gị otuto. Companieslọ ọrụ anyị anyị na-arụ ọrụ ga-akọrịrị ụgwọ ihe ndị merenụ na ụgwọ ụlọ ọrụ ego - ma nye ego mgbazinye na-enweghị nkwa onwe ha ma ọ bụ mkpa iji nyocha ego nkeonwe.
Companieslọ ọrụ dị njikere inye otuto maka na anaghị ewere ndị ahịa ha nnukwu ihe egwu. Ihe kpatara na anaghị ewere ha dị ka nnukwu ihe egwu bụ n'ihi na ndị ahịa azụmaahịa chọrọ iwulite ego azụmaahịa ha site na itinye ego na mmemme ụlọ ọrụ kredit.
Anyị bụ ndị otu Dun & Bradstreet Credibility Corp.
Atụmatụ Ebe E Si Nweta azụmahịa